मोबाइल र सिक्री बन्धकी राखेर पनि शव जलाएको छुः सपना - Birgunj City
मोबाइल र सिक्री बन्धकी राखेर पनि शव जलाएको छुः सपना
बिरगंज सिटी १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:४६मा प्रकाशित (७ महिना अघि) ६३४३ पाठक संख्या
काठमांडौ, १५ मंसीर
म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर बेलायती समाचार प्रसारण संस्था बीबीसीले तयार पारेको २०२० का प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल भएपछि उनको चर्चा एकाएक चुलिएको छ।
हालसम्म उनले सयभन्दा बढी बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिसकेकी छन्। उनी शवलाई हिन्दु परम्पराअनुसार आफै दागबत्ती दिएर अन्तिम संस्कार गर्छिन्। कुनै बेला सडकको खुला आकाशमुनि जीवन बिताएकी सपना सडकले नै समाजसेवामा आउन प्रेरित गरेको बताउँछिन्। उनीसँग तेजन खड्काले गरेको छोटो कुराकानी।
बीबीसीको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
कसरी छनोटमा परे जस्तो लाग्छ ?
कुन माध्यमबाट आफू छनोट भएको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो ?
कत्तिको बधाईको ओइरो लागेको छ ?
काम गर्दा कत्तिको समस्याहरु भोग्नु पर्‍यो ?
अध्ययन कहाँ पुग्यो ?
‘प्लस टु’ सके। अब ब्याचलर ज्वाइन गर्दैछु।
समाजसेवा गर्दै मान्छे राजनीतिमा आउँछन्, तपाईको सोच के छ नि ?
राजनीति आफैमा गलत होइन। राजनीतिमा हुनेले फोहोरी खेल खेलेका छन्। राजनीति बारे खासै मलाई थाहा छैन। समाजसेवालाई नै निरन्तरता दिने हो। राजनीति बारे सोचेको छैन र यसमा आउँदिन पनि।साभार बिएल नेपाली